Madaxweynaha Dowlada Federaalka Somalia Xasan Sheekh iyo Madaxweynaha Maamulka Jubaland oo ku kulmi doona Itoobiya – idalenews.com
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Somalia Xasan Sheekh iyo Madaxweynaha Maamulka Jubaland oo ku kulmi doona Itoobiya
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in ay berito u ambaxaan xarunta dalka Itoobiya ee Adis Ababa si ay halkaasi uga qeyb galaan kulan la isku soo dhaweynaayo arrimaha dowlada iyo Maamulka Jubaland ee uu madaxda ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
Wafdi hordhac ah oo ka socda dowlada ku meel gaarka ah ayaa gaarey Itoobiya, waxaana wafdiga gaarey halkaasi hogaaminaayay wasiiru dowlaha Madaxtooyada Faarax C/qaadir isla markaasna ah ninka ugu tunka weyn siyaasada dowlada federaalka ee Madaweyne Xasan Sheikh Maxamed, iyo xildhibaano ka soo jeedo gobolada Jubooyinka oo kala ah Xildhibaan Sandeere, Samaan Madeey, Daahir Amiin Jeesow, Alankey, Magan iyo Xildhibaan Goodor oo inta mucaarad ku ah dhismaha maamulka Jubaland ee Axmed Madoobe.
Dhanka kale waxaa iyadana magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubada Hoose ka dhoofey wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe kuwaasoo ku sii jeeda ka qeybgalka shirka magaalada Addis Ababa ee dhinacyadaasi is haaya lagu dhexdhexaadinaaayo.
Madaxweynaha Maamulka Jubaland Axmed madoobe ayaa lagu wadaa in magaalada Addis Ababa kula kulmo madaxweynaha DFS Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu wado in 24ka saac ee soo socda gaaro Addis Ababa.
Dowlada Federaalka ayaa isku howlaysa iney hoos u dhigto xiisada khilaafka Jubooyinka iyo mucaaradka dowlada ee beelaha qaar oo dhaliisan sida ay dowladiisu ay dhaqantey maamulada qaar taaoo sare u qaadey colaad qabiilada iyo kala shakiga beelaha Soomaaliyeeddd.
Dhageyso Cali Max’ed Geedi oo mar kale si ba’an u weeraray dowlada federaalka Soomaaliya
Baaqo iyo Talo soo jeedin ka soo baxay Shir Jaaliyada Digil & Mirifle ku Yeesheen dalka Ingiriiska+ Sawiro